News - Xakamaynta saxnaanta mashiinada lathe CNC ee soo saarista
Saamaynta saxnaanta mashiinka lathe ee CNC guud ahaan waxaa sababa dhowr arrimood oo soo socda, mid waa sababta qalabka, tan labaadna waa dhibaatada qalabka, tan saddexaadna waa barnaamij, kan afraadna waa qaladka bartilmaameedka, maanta Wally teknolojiyadda mashiinnada oo aad si kooban u sharaxayso kuwan dhinacyada.
1. Saxsanaanta mashiinka CNC lathe ee ay sababaan qalabka guud ahaan waxaa sababa qaladka nidaamka mashiinka laftiisa iyo qaladka uu sababo ordaanka qalabka mashiinka. Habka loo adeegsanayo qalabka mashiinka, qaybaha asaasiga ah sida jiida hore ayaa laxiranayaa, taas oo keeneysa kororka farqiga, iyo qaladka weyn ee qalabka mashiinka, oo saameyn ku yeelan doona saxsanaanta mashiinka lathe CNC;
2. Marka la shaqeynayo latheynta lathe NC, waxaa aad muhiim u ah in la doorto aaladda goynta. Qalab aan ku habboonayn wuxuu horseedi doonaa culeys mashiin aad u sarreeya iyo qalab aad u dhaqso badan, taas oo horseedi doonta saxnaanta CNC lathe ma buuxin karto shuruudaha alaabta;
3. Xuduudaha goynta aan macquul ahayn ee la dejiyay inta lagu gudajiray barnaamijku sidoo kale waa mid ka mid ah sababaha aan loo damaanad qaadi karin saxitaanka mashiinka CNC lathe. Xuduudaha goynta ee quudinta iyo kacaanka waa in lagu dejiyaa iyadoo la isku darayo aaladda, astaamaha qalabka iyo qalabka, si loo hubiyo saxnaanta mashiinka lathe CNC;
4. Habka loo maro farsamaynta lathe-ka ee NC, khaladka qashin-qubka ee alaabtu sidoo kale waa mid ka mid ah sababaha keenay in saxitaanka mashiinka CNC lathe uusan buuxin karin shuruudaha. Iyada oo la isku daro leexashada iyo shiidida, waqtiyada isku xirida ayaa la yareyn karaa sida ugu macquulsan, taas oo yareyn karta saameynta howsha labaad ee ku saabsan saxnaanta mashiinada CNC lathe ee uu keenay isbeddelka qashinka.
Waxyaabaha kor ku xusan waa tikniyoolajiyada mashiinka volley ee qof walba si uu ula wadaago mowduuca ah saxnaanta mashiinada lathe CNC, rajayn inuu siiyo dadka ka shaqeeya CNC inay tixraacaan.